Izinhlelo zemvelo ezibalulekile zokulwa nokuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu kunemiphumela emibi ezingeni lomhlaba futhi imiphumela yaso iya ngokuya iphawuleka. Kunezindlela zokuzivimba hhayi kuphela ngokugwema ukukhipha amagesi amaningi abamba ukushisa emkhathini, kepha nangokusiza uMhlaba ukuba namandla amakhulu uma kuziwa emandleni. ukumunca i-CO2 emkhathini.
Eplanethi yethu kunezinto eziphilayo ezingokhiye ekubambeni kwalokhu kumunca. Ingabe mayelana imibhede yotshani basolwandle kanye namaxhaphozi asogwini.
Izingqungquthela zokuqala ngosinki abangasogwini bekhabhoni ezitholakala kuphrojekthi zenzeka eMalaga Impilo BlueNatura. Le phrojekthi iqondiswa yiNgqongqoshe kaHulumeni Wesifunda sase-Andalusian Wezemvelo Nokuhlelwa Kwezindawo. Ngalezi zikhathi kuzoba nezingxoxo nezimpikiswano ezijulile lapho ochwepheshe besayensi emkhakheni, abaphathi namanye amaqembu bazobamba iqhaza khona. Kuhloselwe ukukwazi ukubhekana neqhaza lezinto eziphilayo zasogwini nasolwandle ngenkathi kucutshungulwa futhi kugcinwa i-CO2. I-CO2 yigesi yokushisa ekhishwa kakhulu emkhathini namuhla futhi ene-concentration ephezulu (cishe i-400 ppm).
Lolu hlobo lokufakwa kwe-CO2 emkhathini ngezindawo ezisogwini nasolwandle lubizwa kanjalo "I-Blue Carbon". Lezi zingqungquthela zingaphakathi kwephrojekthi ye-European Life BlueNatura futhi ukuvulwa kwayo kuhanjelwe nguMqondisi Jikelele Wezokuphathwa Kwezemvelo Nezindawo Ezivikelwe zeBhodi, uJavier Madrid, kanye nomqondisi we-IUCN-Med, u-Antonio Troya.
Ukuze wazi amandla wekhabhoni eluhlaza okwesibhakabhaka anezinhlelo zethu zemvelo, kuyadingeka ukuthi sikwazi ukudala ukwazi okuhlangene ngalokhu. Ngale ndlela, bayakhuthazwa ukuthi basebenzisane nabantu bendawo ukuze bakwazi ukuqonda ndawonye ukuthi imvelo esizungezile ingasiza kanjani ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu futhi hhayi inkinga njengoba abantu abaningi bekubona.
Lapho ukwazi okwengeziwe ngezilwandle nokusebenza kwazo, kuzoba ngcono. Izilwandle zinemisebenzi eminingana ebalulekile egcina ukulinganisela kweplanethi. Sisebenza njengosinki obalulekile wekhabhoni, futhi simunca ukushisa futhi sikhiqize uhhafu womoya-mpilo esiwuphefumulayo.
Iphrojekthi iLife BlueNatura iphrojekthi evuselelekayo uma kukhulunywa ngokuthuthukisa ulwazi ngomsebenzi nendima yamaxhaphozi, amaxhaphozi nemibhede yotshani basolwandle ogwini lwaseMedithera e ukumuncwa nokugcinwa kwamagesi abamba ukushisa. Izindawo ezivikelwe olwandle zisebenza njengezindawo lapho umsebenzi wokumunca i-CO2 ungasetshenziswa kakhulu ngoba yizindawo lapho uhlaza lwasolwandle lukhula khona kangcono. Ngokuvikelwa nokuba nokulawula okukhulu ezintweni ezehlisa isithunzi ezenziwa kuleso sikhala, kukhona umthelela omncane owehlisa ukwehlukahlukana kwezinto eziphilayo kanye nokulinganisela kwemvelo kwemvelo. Ngakho-ke, izindawo zasolwandle ezivikelwe ziyisikhali esihle ekulweni nokuguquguquka kwesimo sezulu ngoba ziyasiza ukumuncwa kanye nokugcinwa kwezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo
Kulezi zinsuku "Ukongiwa kwamasinki e-carbon asogwini" Zibanjelwe eLa Térmica, eMalaga futhi zihlose ukuhlola ulwazi lwamanje ngemvelo yasogwini nasolwandle lapho kubhekene nokuguquka kwesimo sezulu, zombili zombono wezemvelo nezomnotho.
Kuzokwazi ukufunda ngamaphrojekthi kanye nokuhlangenwe nakho okuzokhombisa izici ezahlukahlukene zokubusa, izimakethe zekhabhoni, nolwazi kanye nokubaluleka kwezinsizakalo ezihlinzekwa yilezi zimvelo zasolwandle nezasogwini, njengamaxhaphozi notshani basolwandle, kubantu bendawo.
Iphrojekthi iLife Blue Natura iqondiswa nguMnyango Wezemvelo Nokuhlelwa Kwezindawo, njengoba sishilo phambilini futhi, ngaphezu kwalokho, isivele inabalingani be-Environment and Water Agency, i-Centre for Advanced Studies of Blanes yoMkhandlu Ophakeme Wezocwaningo. Ososayensi, Isikhungo se-IUCN sokubambisana kweMedithera kanye ne-Asociación Hombre y Territorio.
Le phrojekthi inesikhathi seminyaka emi-4. Iqale ngonyaka odlule futhi inosuku lokuphelelwa yisikhathi lwango-2019. Inesabelomali sokwenza kwayo I-2.513.792 euro, ixhaswa yi-European LIFE Programme futhi ixhaswe ngezimali yi-CEPSA.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Izinhlelo zemvelo ezibalulekile zokulwa nokuguquka kwesimo sezulu